Semalt सेयर3स्प्याम स्प्याममा मूल्यवान युक्तिहरू
सन्देश एक सन्देश पठाउन को लागी एक सरल र सबै भन्दा प्रभावी तरीका हो। ईमेलहरू एक विश्वसनीय विधि भएको छ जुन धेरै कम्पनीहरूले विभिन्न कार्यहरू स्वचालित गरेर फाइदा लिन्छन् जस्तै साइन अप र सदस्यताहरूको प्रमाणीकरण। बिभिन्न स्वचालन र अधिसूचनाहरू ईमेल मार्फत प्रयोगकर्तामा तुरून्त पहुँच गर्न सक्दछन्।
दुर्भाग्यवस, साइबर अपराधीहरूसँग तिनीहरूको प्रयास गर्नका लागि स्प्याम प्रयोग गर्ने विकल्प छ। उदाहरण को लागी, धेरै धेरै स्पाम ईमेलहरू धेरै व्यक्तिको ईमेलहरू टाँसिरहेका छन्। यी स्पाम ईमेलहरूले धेरै बोटहरू समावेश गर्दछ जुन मानिसहरूलाई उनीहरूको मार्केटिंग अभियानहरूको अधिकतम प्राप्त गर्न असफल बनाउन सक्छ। अन्य केसहरूमा, यी सन्देशहरूमा लि links्क हुन्छन् जसले सजिलैसँग फिशर पृष्ठमा व्यक्ति लिन सक्दछ।
Semalt को अग्रणी विशेषज्ञ लिसा मिशेल द्वारा प्रदान गरेका केहि तरिकाहरू, तपाईंलाई स्पाम सन्देशहरूबाट टाढा रहन मद्दत गर्दछ।
१. तपाईका ईमेलहरू गोप्य राख्नुहोस्।
एक ईमेल ठेगाना सबै स्पामरलाई आफ्नो कर्तव्यहरू पूरा गर्न आवश्यक छ। तपाईंको ईमेल गोप्य राख्नु आवश्यक छ। तपाईंको ईमेल धेरै व्यक्तिको लागि नखोजाउनुहोस् किनकि यसले स्प्यामरहरूलाई गुमाउने सम्भावना बढाउन सक्छ। यसका अतिरिक्त, यो सम्भव छ मेल बक्समा सबै ईमेलहरूमा स्प्याम सन्देश प्राप्त गर्नका लागि। व्यक्तिहरूका लागि जोसँग वेबसाइटहरू छन्, कुनै पनि पोष्टमा तपाईंको ईमेल प्रयोग नगर्नुहोस्। स्पामर्ससँग धेरै स्वचालित उपकरणहरू छन् जुन साइटमा अवस्थित ईमेल ठेगानाहरू फेला पार्न र प्रयोग गर्न सक्दछ।
२. स्प्याम फिल्टरहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
यी सफ्टवेयर हुन् जसमा स्प्याम ईमेलहरू पत्ता लगाउने र ब्लक गर्ने सम्भावना हुन्छ। यी सफ्टवेयरसँग धेरै विधिहरू र संसाधनहरू छन् जसले तिनीहरूलाई विश्वासयोग्य ईमेलहरूबाट स्प्याम ईमेलहरू फरक पार्छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ स्प्याम ब्लकरहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भरोसायोग्य कम्पनीहरूबाट आउँछन्। ईमेलहरू स्प्यामहरू भाइरल हुने राम्रो तरीका हो। तसर्थ, तिनीहरूले तत्काल रोकावट प्राप्त गर्दछ। गुगलसँग स्पामको लागि उनीहरूको ईमेल ठेगानहरू परीक्षक छन् र यी केही सन्देशहरू फिल्टर गर्न सक्दछन्। यसले मालवेयर र ट्रोजन्सका लागि संलग्नकहरू पनि स्क्यान गर्न सक्दछ।
Blind. आँखा बन्द गरेर क्लिक नगर्नुहोस्।
तपाईंले क्लिक गर्नु अघि युआरएलको विश्वसनीयता यकिन गर्नुहोस्। हानिकारक नतिजाहरूबाट जोगिनको एक अत्यावश्यक तरिकाहरू मध्ये एक स्प्यामरको ईमेललाई पूर्ण रूपमा रोक्नु हो। सर्वप्रथम, लिंक क्लिक गर्दा तपाईंलाई फिशर पृष्ठमा अवस्थित गराउँदछ। दोस्रो, स्प्याम ईमेलमा उपस्थित एट्याच्मेन्टहरूमा ट्रोजन्स हुनसक्दछ, जुन कम्प्युटर सुरक्षाको कुरा आउँदा धेरै हानिकारक हुन्छ। एसईओ वा स्प्याममा अन्य कार्यहरू गर्ने व्यक्तित्वले उपकरणहरू प्रयोग गर्दछ जुन स track्लग्नता ट्र्याक गर्दछ। यी उपकरणहरूले स्पाम ईमेलमा केहि क्लिक गर्नाले उनीहरूलाई पृष्ठपोषण पठाउन सक्दछ, ईमेल ठेगाना कुनै पनि वेबसाइटमा प्रयोगको लागि मान्य छ भनेर पुष्टि गर्दै।
धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू स्पाम र अन्य मालिसियस साइबर-हमलाको लागि पर्दछन्। इन्टरनेट सर्फिंग गरेको एक व्यक्तिले अज्ञात स्रोतहरूबाट आएको धेरै ईमेलहरू फेला पार्न सक्दछ। यी ईमेलहरूले विज्ञापन अभियानका साथै अन्य कार्यहरू समावेश गर्दछ जुन प्रयोगकर्तालाई कल-टु-एक्शन कार्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्दछ। यी प्राय स्प्याम ईमेलहरूले प्रयोगकर्तालाई वेबसाइटको जोखिम बढाउँदै गम्भीर क्षति भोग्दछन्। तपाईं माथीका दिशानिर्देशहरू प्रयोग गरेर स्पामको बारेमा असंख्य समस्याहरूबाट बच्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, त्यहाँ अन्य धेरै ह्याक प्रयासहरू छन् जुन तपाईं स्पामबाट टाढा सर्दैबाट बच्न सक्नुहुन्छ।